▲ကိုအသုံးပြုခြင်း iSpyoo ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သမ္မာတရားကိုလေ့လာသင်ယူရန်
▲သူတို့ကအမှန်တကယ်တည်နေရာကိုနှင့် ပတ်သက်. မုသာစကားကိုကွေ?
■ဝေးလံခေါင်သီ SMS ကိုဖတ်ပြ, မှတ်တမ်းများ Call, အီးမေးလ်များ, ရုပ်ပုံများ
■ Track ကိုဖုန်းတည်နေရာနဲ့ပိုပြီး ...
အားလုံးစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ■( iPhone နှင့် Android )
■ Listen ပတ်ဝန်းကျင်, track ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာ, အားလုံးသည်ဓါတ်ပုံများဖမ်းဆီးခံရသောကိုကြည့်ပါ
• ?? ဆဲလ်ဖုန်းအဘို့ parental controls
• ?? အဘယျသို့သင်တို့၏သားသမီးကသူတို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်လုပ်နေတယ်(ခြေရာခံ GPS စနစ်အခမဲ့ )
• ?? Facebook က, WhatsApp ကို, Twitter ကို, Twitter ကိုစာတိုက်
iSpyoo နှင့်အတူအပြည့်အဝ features တွေ
►Spy Viber ကို
►Spy Facebook ကမက်ဆေ့ခ်ျများ
iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုသူလျှို
♥ Monitor ကိုဝန်ထမ်းများ
♥ Monitor ကိုသတို့သားနှင့်သတို့သမီး
♥ Track ဖုန်းနံပါတ်တည်နေရာ
iPhone ကို & များအတွက်♥သူလျှို app ကို
► ?? ???? 100% လုပ်စရာမလိုဘူး
► ?? ငွေပြန်လည်5ရက်အတွက်
ဆိုင်းအပ် – အခမဲ့ပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသော ! ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း – စမ်းသပ်ခြင်း 48 hours
အများဆုံးအိမ်ထောင်သက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ blissfully မသိဘဲဖြစ်ကြ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်အမှန်တရားတွေတစ်ခုမှာဖောက်ပြန်၏အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် & extramarital ရေးရာ.
iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုသူလျှိုအစွမ်းထက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအင်္ဂါရပ်များအနက်တစ်ဦးကလုံးအာဆင်နယ်အသင်းကမ်းလှမ်း!
အက်စ်အမ်အက်စ်, လူမှု Messenger ကို
သူလျှို Viber ကို.
သူလျှိုက Facebook Messenger ကို.
သူလျှို Skype ကို.
သူလျှို WhatsApp ကို.
History ကိုမှတ်တမ်းများ Call
incoming ကန့်သတ် Calls.
ကြည့်ရန် Visited Websites.
website က Bookmarks.
Phone အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရန်တိုက်ရိုက် Listen.
မာလ်တီမီဒီယာ Files ကို
voice recorder Listen.
ကျနော်တို့ခရက်ဒစ်ကတ်များ Accept နှင့် PayPal ကနေတဲ့.
ပဲသင်ကိုစောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ဖုန်းပေါ်မှာလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ. သိပ်မကြာတော့ပါဘူးထက်ပိုယူသည်၎င်း၏ဒါလွယ်ကူသော2မိနစ်.
Android မှာ: 2.x ထံမှ 5.x မှထောက်ခံမှု
iPhone ကို: 3G က, 3GS, 4, 4S က, 5, 5S က, 5ကို C, 6,6Plus အားတက် iOS ကို 7.x မှ, 8.x က
သငျသညျကိုစောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ဖုန်းပေါ်မှာလျှောက်လွှာကို Download လုပ်
view မှာ Data အွန်လိုင်း
သင့်အွန်လိုင်း iSpyoo ကို Hack Viber ကိုရန် Log, ကိုစောင့်ကြည့် phone ကနေအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန် Whatsapp အခမဲ့အကောင့်ကို Hack ဧရိယာ.
အားလုံးသည် logged သတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းအကောင့်ကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ်.
ကြည့်ရန် Demo လျင်မြန်စွာ Tours
ပြီးပြည့်စုံ SMS ကို View စာသားမက်ဆေ့
Monitor ကို WhatsApp ကို နှင့် iMessage
GPS တည်နေရာကိုရယူပါ အဖြစ်မကြာခဏသင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်
Monitor ကို Facebook က နှင့် Twitter ကို မက်ဆေ့ခ်ျများ
စံချိန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမခေါ် နှင့် လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ
ကြည့်ရှုခြင်း ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ ဖုန်းရဲ့
ကြည့်ရှုခြင်း မှတ်စုများ, အဆက်အသွယ်များနှင့်အီးမေးလ်က
Block ကို 's Apps ဖုန်းပေါ်မှာ run နေမှ
ကြည့်ရန်တိုက်ရိုက် Screen ကို တိုက်ရိုက် Panel ကို Option ကိုနှင့်အတူ
စံချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တိုက်ရိုက် Panel ကိုနှင့်အတူ
ယူ လက်ငင်းသူလျှိုဓါတ်ပုံများ တိုက်ရိုက် Panel ကိုနှင့်အတူ
အင်္ဂါရပ်များ, UPDATE စာရင်း
iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုသူလျှို နေရာအတိအကျ Monitor နိုင်သလား, Cell Phone Spy App, Android အတွက်သူလျှို App ကို, မှတ်တမ်းတင်အခမဲ့ Call, သူလျှို Whatsapp, SMS စာတို Tracker, အခမဲ့အကြောင်းမူကားသူလျှိုခေါ်ရန်.
Phone ကို SMS ကိုဝေးလံခေါင်သီ Read
Phone ကိုဆက်သွယ်ရန် Read & သမိုင်းကမခေါ်
iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုအခမဲ့ Spy အာဏာအရှိဆုံးသူလျှိုဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်.
ပြီးပြည့်စုံမမြင်ရတဲ့ mode မှာအကျင့်ကိုကျင့်, ထိုသို့စောင့်ကြည့်ဖုန်းပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမ.
ကျော် 100,000 ကျေနပ်မှုဖောက်သည်များပြီးသားအသုံးပြုနေကြသည် iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုသူလျှို .
iSpyoo မိုဘိုင်း App ကိုသူလျှို အားလုံးကွန်ရက်များပေါ်မှာရှိသမျှသောဖုန်းများပေါ်တွင်အကျင့်ကိုကျင့်.
တောလည်ရာခုနှစ်တွင် iSpyoo မိုဘိုင်းသူလျှို
သင်တဦးတည်းကြီးမြတ် package ကိုအပေါင်းတို့၌ဤကြီးစွာသော features တွေခံစားနိုငျ.
iSpyoo ကမ္ဘာတဝှမ်းအားလုံးသည်ကွန်ရက်တွင် Works:
ကျနော်တို့ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကအခမဲ့ဝေငှ 48 hours !!!!